Istaadiyeemiin Wallaggaa Birrii miilyoona 196'n hojjetame waggaa kudhan booda eebbifame - BBC News Afaan Oromoo
Istaadiyeemiin Wallaggaa Birrii miilyoona 196'n hojjetame waggaa kudhan booda eebbifame
Madda suuraa, Fuula Feesbuukii BiirooKomunikeeshini Oromiyaa
Ijaarsi istaadiyeemii wallaggaa marsaa jalqabaa waggaa 10 booda xumuramuun eebbifame.
Istaadiyeemichi deeggarsa maallaqaa uummataa fi mootummaa Naannoo Oromiyaa irraa argame Birrii miliyoona 196'n kan ijaarame yoo tahu ijaarsi isaa yeroo dheeraaf lafa irra harkifachuun isaa komii guddaa kaasaa tureera.
Sirna eebbaa istaadiyeemichaa irratti MM Abiy Ahimad fi pirezidantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa argamaniiru.
MM Abiy Ahimadii fi Obbo Lammaan dirricha keessatti kubba waliin dhiituun hawwaasa isaan simachuuf bahe hedduu fuulduratti eebbisiisaniiru.
Madda suuraa, Fuula Feesbuukii Waajjira MM
Obbo Lammaa fi MM Abiy Ahimed istaadiyeemii Wallaggaa keessatti yeroo kubba wal harkaa fuudhanii galchan.
Jiraattotni magaalaa Naqamtee fi naannaa ishees simannaa fi sirna eebbaa kana irratti kumaatamaan bahaniiru.
Baajatni istaadiyeemichaaf qabame malaammaltummaan manca'eera jechuun uummatni yeroo dheeraaf komii kaasaa ture.
Haa tahu malee istaadiyeemichi baajata xiqqaan qulqullina isaa eeggatee kan ijaaramedha jedhan Obbo Tashoomaa Gammadaa itti gaafatamaan ijaarsa istaadiyeemichaa.
Istaadiyeemiin Wallaggaa jalqabbii ijaarsa istaadiyeemota biroo kan akka istaadiyeemii Baahir Daarii fi Hawwaasaaf bu'uuradha.
Istaadiyeemiin wallaggaa bara 2001 A.L.I keessa uummataan ijaaramuu kan jalqabe yoo tahu jiraattotni wallagaa arfanii fi quuqamtootni kaanis keessatti hirmaatanii ture.
Fulbaana 1 bara 1999 ture istaadiyeemichi yeroo HIV AIDS magaalaa Naqamtee keessatti babal'atu bakka oolmaa dargaggota isaaniif mijeesssu qabna jechuun namoota muraasaan gidduutti mariin kan eegale.
Sana boodas hoggansi mootummaa magaalichaa fi godinaa keessatti hirmaachuun uummata keessas koreen filamee akka jalqabuuf murtaa'e. Obbo Tashoomee Gammadaa namoota yeroo sana yaada kana wixineessan keessaa tokko turan.
Boodas hogganaa ijaarsa istaadiyeemicha tahuun filamuun hanga ammaatti kaffaltii miindaa tokko malee hojicha uummata bakka bu'uunis hordofaafi hojechiisaa turaniiru.
Kunis dargaggota fayyaa qabeeyyii humna misoomaa tahan horachuu qabna malee osoo nuyi jirruu maaliif dhalootni dhukkuban miidhama jechuun ture kan eegalle jedhan.
''Istaadiyeemiin kun kan uummataati,uummatatu ofumaan jalqabe'' jedhu Obbo Tashoomeen.
Abbootii qabeenyaa fi uummatni godinaalee garaagaraa keessatti hirmaataniiru.
Obbo Tashoomaa Gammadaa Istaadiyeemii Wallaggaa keessatti
Madda Baajata Istaadiyeemichaa
Bara 2001 Teletooniin qophaa'e irratti birriin Waadaa galamee miiliyoona 48 ol kan tahu walitti qabamuu itti gaafatamaan ijaarsichaa Obbo Tashomaan himaniiru.
''Maqaa kaampaanii MIDROK'n abbaan qabeenyaa Sheek Allaamodiin Birrii miiliyoona 14 nuuf kennanii ture''
Dabalataan jedhan Obbo Tashoomeen maqaa maatii isaaniin akka dhuunfaatti doolara miiliyoona tokko [$1Mn] kennuuf waadaa nuuf galaniis waadaa isaanii hin raawwatne jedhan.
Sheek Allamodiin mana hidhaa waan turaniif amma yeroo biyyatti deebi'uun tasgabbaa'an akka nuuf kennaniif ni gafannas jedhan Obbo Tashoomeen.
Ijaarsi istaadiyeemichaa maaliif harkifate?
Ijaarsi istaadiyeemii Wallaggaa yeroo jalqabu waggota sadii keessatti ni xumurama haa jedhamu iyyuu malee waggoota 10 ol lakkofsiseera.
Ijaarsi Hojiiwwan Bishaan Oromiyaa humna namaa gahaa waan hin qabneefi kaffaltii nuyi raawwannun deebisani ijaaraa waan turaniif harkifates jedhan itti gaafatamaan ijaarsa istaadiyeemicha Obbo Tashoomeen.
''Gama keenyaan baajatni kaffalamu dhibee kan addaan cite ji'a sadiif qofaadha. Booda Mootummaan Naannoo Oromiyaa baajata waan ramadeef hojichi itti fufe.''
Dabalataan Ijaarsi Hojiiwwan Bishaan Oromiyaa sana dura istaadiyeemii tokko illee ijaaree waan hin beekneef muuxannoos hin qaban ture jedhan.
Haa tahu malee hammuma yeroon dabalaa adeemu gatiin bittaa meeshaalee ijaarsaa waan dabalaa dhufaniif gatii jalqaba walii galleenis xumuramuu waan qabuuf akka ogeessotni jedhanitti Interpirayiziin hojiiwwan ijaarsa Bishaan Oromiyaa Birrii miliyoona 150 ol kasaaraa keessa galuu hin hafne jedhan.
Oduu namootni dhuunfaa adeemsisan irraa kan hafe maallaqni uummataa manca'es hin jiru jedhanii istaadiyeemota biyya keessatti ijaaraman waliin yommuu baasii isaa wal bira qabnu tokko sadaffaa isaanii caalaa hin kaffalamne jedha
Ijaarsi istaadiyeemicha rakkoo qulqullinaa yeroo isa mudataa turetti irra deebiin akka sirratu taasifamaa tureera.
Isaan keessaa margi biyya Xaaliyaaniidhaa dhufee biqilchame aramaadhaan waan dhaalameef irra deebiin margi naannoo dhaabamee kunuunfamaa tureera.
Kilabii bulchiinsa magaalaa Naqamtee Liigii Olaanaa keessatti dorgomaa jiruuf carraa gaarii tahus ispoortessitoota ciccimoo hedduu horachuu irratti garuu ammas hanqinni jira.
Istaadiyeemichi ulaagaa idila adunyaa kan guutu yoo tahu dorgommiiwwan garaagaraa keessumeessuu danda'uusaa Obbo Tashoomaa Gammadaa BBCtti himaniiru.
Tiraakiin ykn sararri fiigichaa istaadiyeemichaa kan hojjete kaampaanii Nezerlaandis irraa dhufuun yoo tahu sarara isaa kan baasan immoo Jarman irraa dhufuuni jedhan Obbo Tashoomeen.
Sadarakaa idila adunyaattis qulqullinaa fi sadarkaa isaa ilaaluun waraqaa ragaa kan kennu Jarman irraa dhaabbata beekamtii qabu yoo tahu isa eegaa jirra jedhan.
Baaxii istaadiyeemichaa hojjechuuf jalqaba kan yaadame Birrii miliyoona 53 yoo tahu amma qorannoo gabaa gaggeessinee Birrii miliyoona 370 ol fudhachuu akka danda'u himanii ammaaf humna kanaa waan hin qabneef turuun isaa hin oolu jedhan.
Amma maallaqani ijaarsicha irraa hafe gara biraan miliyyona 33 tahus akka jiru dubbatu.
Manni kitaabaa ammayyaa qaama istaadiyeemichaa tahuun METEC deeggarsaan jalqabe 70% irra erga gahee dhaabbatee bubbuleera.
Yoo hojicha hin xumuran tahe mootummaan Naannoo Oromiyaa xumursiisuuf karoorfachuus himanii manni kitaabichaa bifa aadaa Oromoo agarsiisuu danda'uuf masara Kumsaa Morodaa ibsuun hojjetamuu akka jalqabes BBCtti himaniiru.
Taa'umsi yoo galeef hanga namoota kuma 30 olii qabachuu kan danda'u yoo tahu, taa'umsa malee isaa ol keessummeessuu akka danda'u iyyaafanneerra.
Istaadiyeemichi dorgommiiwwan atileetiksii garaagaraa fi kubba miilaaf kan tajaajilu yoo tahu naannaan istaadiyeemichaas manneetii daldalaaf oolan kutaalee sadarkaa isaanii eeggatan 16 kan of keessaa qabu yoo tahu koreen hundaa'e bifa hojiitti galamu irratti hojjetamuuf qophiin eegaleeras jedhan.
Dabalataan MM Abiy Ahimed fi Obbo Lammaan gidduugala gabaa kanaan dura dargaggota hojii dhabeeyyii irratti gurmeessuuf hojjetames ni eebbisiisuniiru.
Dilbata dhufu irraa eegaluun dorgommiin Shaampiyoonaa Guutuu Oromiyaa istaadiyeemii Wallaggaa kana irratti gaggeefama.
MM UK Booriis Joonsan maaliif sirna awwaalcha ilma mootiirraa hafu?
11 Ebla 2021
Odolli Kariibiyaan dhukkee dhohiinsa volkaanoo booda roobeen haguugamte
Magaalaa Maayinamaaritti namootni baay'een humna waraanaan ajjeefaman
Ramadaana ilaalchisee ilaalchota qeeqaman jahan
Yeroo dhuma kan haaromfame: 18 Caamsaa 2018
Maanchister Siitiin qabxii gate, har'a Tootenhaam Yuunaayitid waliin morkata